Dalbashada Sanduuqa Amaanada Guriyeynta - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Housing|Sanduuqa Amaanada Guriyeynta (HTF)|Dalbashada Sanduuqa Amaanada Guriyeynta
Mashruuc loogu adeegayo qoysaska dakhligoodu hooseeyo tan iyo 2012 kana socda Ururka Horumarinta Xaafadaha ee Delridge, Unity Village oo ku yaal White Center.
Barnaamijka Sanduuqa Guryaha ee 'Trust Trust Fund' wuxuu ka dhigayaa lacag la heli karo mashaariic guriyeyn oo la awoodi karo iyadoo loo marayo hanaan codsi tartan ah. Codsiyada guud ahaan waa la aqbalaa sanadkiiba mar, laakiin waqtiga iyo soo noqnoqodka way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran cabirka iyo nooca ku habboonaanta barnaamijka ee Sharci dejinta. Booqo boggan si joogto ah si aad ugu maalgeliso helitaanka iyo cusboonaysiinta dalabka.
2020 Maalgalinta HTF Dhaqanka ah (Xiran)
Wareegan maalgalinta ayaa hada xiran. Codsiyada waxaa iska lahaa Waaxda Ganacsiga duhurkii markay ahayd Sebtember 29, 2020. Abaalmarinta waxaa lagu dhawaaqi doonaa Diseembar 2020.
Waaxda Ganacsiga waaxdeeda maaliyadeed ee guryeynta ayaa ku dhawaaqday codsi bisha Juun 2020 codsiyada raadinaya maalgelinta raasumaalka ee loogu talagalay horumarinta guryaha la awoodi karo ee qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee gobolka Washington.
73 codsi ayaa loo gudbiyay wareejinta maalgalinta Hidaha iyo Dhaqanka 2020-ka ee loo yaqaan '2'. Wadarta codsiyada waxaa ka mid ah $ 181 milyan oo ka socda barnaamijka HTF, National HTF, iyo HOME, $ 5.5 milyan oo ka socota sanduuqa gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'Private Match fund', iyo $ 3.6 milyan oo ka socda sanduuqa 'Ultra-High Energy Efficiency fund', oo dhammaantood lagu maalgelin karo dhismaha ama dhowrista ku dhowaad 4,000. cutubyo guryo la awoodi karo.
Ogeysiiska Helitaanka HTF ee Dhaqanka ee 2020 ("NOFA") iyo agabyada arjiga, ee laga heli karo iskuxiraha hoose, waxaa lagu aqoonsaday macluumaad gaar ah oo ku saabsan shuruudaha maalgelinta iyo mudnaanta, habka loo dalbanayo iyo taariikhda muhiimadda u leh codsadayaasha.
Halkan guji halkan 2020 Dhaqanka HTF NOFA & Agabka Codsiga (Xidhan).
Mashaariicda la soo jeediyay ayaa loogu talagalay inay u adeegaan dadyow fara badan oo dakhligoodu hooseeyo iyo baahiyo gaar ah, oo ay ku jiraan dadka qaba cudurrada maskaxda ee daba dheeraada, dadka naafada ah, halyeeyada, waayeelka, shaqaalaha beeraha, dadka iyo qoysaska bilaa hoyga ah, iyo sidoo kale kuwa dakhligoodu hooseeyo marka hore- waqtiga iibsadayaasha guryaha.
Halkan guji si aad u hesho liiska 2020 codsiyada HTF Dhaqameed ee la helay.
Koox wada shaqeyn ah oo ay ku jiraan shaqaalaha ganacsiga oo ka kala yimid noocyo kala duwan, iyagoo ka duulaya khibrada shaqsiyaadka ka socda hay'adaha kale ee gobolka (sida ay khuseyso), waxay dib u eegi doonaan oo ay qiimeyn doonaan codsiyada iyagoo rajeynaya sameynta ogeysiisyo abaalmarin ah ama ku saabsan Diseembar 23, 2020.
Fadlan nala soo socodsii haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah. Haddii aad dareento in codsiyada HTF-da ee Dhaqanka ee 2020 la helay uu khaldan yahay (tusaale ahaan, in laga saaray codsigii ururkaaga, tirada unugyada ayaa si khaldan loogu qoray, iwm), fadlan la xiriir kooxda HFU htfapp@commerce.wa.gov.
2020 Guriyeynta Beesha & Cuntada Maalgalinta Beesha (Xiran)
Waaxda Ganacsiga ee Qaybta Maaliyadeed ee Guriyeynta ayaa ku dhawaaqday fursad deeq-lacageed oo gaar ah oo loogu talagalay ururada doonaya maalgelinta raasumaalka si ay u horumariyaan qiime jaban Guryeynta Beesha iyo Bulshooyinka Guryaha ee loogu talagalay dadka guri la'aanta ah iyo qoysaska.
Shan (5) codsi ayaa la helay iyaga oo weydiisanaya $ 9.1 milyan oo ah maalgalinta Guriyeynta Bulshada iyo Cottage Communities iyo $ 950k oo ka socda sanduuqa Private Match fund. Wareegtani maaliyadeed waa in lagu maalgeliyo guryeyn siisa bulsho taageero joogta ah shaqsiyaadka ama qoysaska xilligan la kulmaya hoy la'aan. Mashruucyada ayaa looga baahan yahay mid kasta inuu horumariyo ugu yaraan afar deganaansho oo joogto ah, shaqsi guri oo si raaxo leh loogu noolaan karo sanadka oo dhan. Codsiyada la helay waxay soo jeedinayaan in la abuuro cutubyo ugu horrayn qaybaha miyiga ee Washington. Liiska codsiyada la helay waa la daawan karaa halkan.
The 2020 Guriyeynta Beesha & Guryaha Bulshada NOFA wuxuu si faahfaahsan u faahfaahinayaa macluumaad gaar ah oo ku saabsan shuruudaha maalgelinta iyo mudnaanta, nidaamka gudbinta arjiga, iyo taariikhda muhiimadda.
2020 Maalgelinta Guryeynta Qaaska ah (Xiran)
Wareegan maalgalinta ayaa hada xiran. Codsiyada waxaa iska lahaa Waaxda Ganacsiga by MAYA Sebtember 2, 2020.
Afar (4) codsi ayaa la soo gudbiyay, iyagoo ka codsaday wadar ahaan ku dhowaad $ 7 milyan oo ah maalgelinta GOLAHA SHAQADA Lacag ayaa loo heli karaa dhismaha guryo qaybsan oo u adeegi doona shakhsiyaadka hoylaawayaasha ah markay soo galaan ugu yaraan konton (50) sano. Mashruucyada la soo jeediyay waxay raadinayaan lacag si loo abuuro 86 unug, oo ugu horrayn laga sameeyo qaybaha miyiga ah ee Washington. Liiska codsiyada la helay waa la daawan karaa halkan.
The Ogaysiiska Guryeynta ee HAYNTA 2020 (NOFA) wuxuu faahfaahin ka bixinayaa macluumaad gaar ah oo ku saabsan shuruudaha maalgelinta, mudnaanta maalgashiga, habka gudbinta arjiga, iyo taariikhaha muhiimada.
Halkan ka eeg 2020 Noocyada Guryeynta Nooca ah & agabyada arjiga.
Dukumiintiga Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo ayaa laga soo ururiyey su'aalaha la helay intii lagu jiray muddadii Caawinta Farsamada ee loogu talagalay Module-ka Module ee Module (# HFU-2020-02). Jawaabo ayaa loo heli karaa su'aal kasta. Halkan guji si aad u aragto dukumiintiga Su'aalaha La Weydiiyo.
DULSHADA: Lacagaha Guryeynta Habaysan waxaa lagu qoondeeyay Miisaaniyadda Maaliyadeed ee 2019-2021, Bedelka Guriga Biil 1102, Qaybta 1029 (1) (b), laguna beddelay Miisaaniyadda Dheeraadka ah ee 2020, Beddelka Beddelka Golaha Guurtida Bill 6248, Qaybta 1003 (1) (b).
Kadib markii la meelmariyey miisaaniyadii labadii sanoba mar, kooxda Sanduuqa Guryaha ee 'Trust Trust Fund' waxay ku qabteen webinar guryaha mucjisada ah (Sebtember 5, 2019), si ay ugala hadlaan lacagaha jira iyo inay u soo ururiyaan jawaab celin ka hor codsiyada. Kaqeybgalayaasha webinar waxay fursad u heleen inay su'aalo weydiiyaan, raadiyaan sharaxaad ku saabsan lacagaha la heli karo, iyo inay talo ku soo biiriyaan habka weydiisashada. Wadahadalkani wuxuu udub dhexaad u ahaa horumarinta jihada loo qaadayo barnaamijka. Si aad dib ugu eegto bogagga bandhigyada webinar ee 2019 iyo su'aalaha iyo jawaabaha la weyddiiyey intii lagu jiray webinar, fadlan booqo halkan.
Xilliga jiilaalka ee 2019, hay'adaha waxaa lagu dhiirrigaliyay inay soo gudbiyaan fikradaha kaliya ee fikradaha loogu talagalay mashaariicda qaabdhismeedka ah. Tani waxay ahayd in la qiimeeyo baahida iyo mashaariicda suurtagalka ah ee dhuumaha. Codsiyadan "Marxaladda 1" looma qiimeynin go'aannada maalgelinta. Liiska ururada soo gudbiyay codsiyada 2019 Heerka 1 waa la daabacay halkan. Markii aan gudbiyay soojeedinta Heerka 1-aad ma ahayn shuruudo hore oo lagu dalbanayay wareegga Guriyeynta 'MODULAR 2020'.
Sanduuqa Ilaalinta Kordhinta Jaban ee 2020 (Waa Xidhan yahay)
The Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington abaalmarin $ 12.5 milyan oo deeqo ah oo loogu talagalay 7 mashruucyo guriyayn oo la awoodi karo oo ku yaal bulshooyinka reer miyiga ah ee gobolka oo dhan. Eeg liiska oo dhameystiran halkan.
Lacagtani waxay gacan ka geysan doontaa sidii loo ilaalin lahaa qiyaastii 150 unugyo kiro ah oo isugu jira qoysas badan oo mashaariic miyi ku jira oo halista ugu jira inay lumiyaan awooddooda awgood sababo la xiriira isticmaalka xaddidaadda dakhligoodu hooseeyo. Maalgalintu waxay ka timaaddaa Sanduuqa Aaminaadda Guriyeynta ee gobolka, oo lagu weydiistay hoos timaadda Ilaalinta Kordhinta Jiritaanka 2020 NOFA # HFU-2020-01 bisha Juun 2020.
Ganacsigu wuxuu helay 8 codsi, isagoo codsaday in ka badan $ 14 milyan. Maalgelinta waxaa loo heley oo keliya ilaalinta mashruucyada guryaha kirada ah ee qoysaska badan ee la awoodi karo oo halista ugu jira inay lumiyaan awood darrada sababo la xiriira dhicitaanka xaddidaadda isticmaalka. Liiska codsiyada la helay waa la daawan karaa halkan.
Sharci dejinta 2020 waxay u qoondeysay $ 10 milyan oo loogu talagalay Sanduuqa Guryaha ee Guryaha (HTF) [ESSB 6168, Qeybta 127 §118] keliya si loo ilaaliyo guryaha la kireysto ee qoysaska badan ee la awoodi karo oo halista ugu jira luminta awood darrada sababtoo ah dhicitaanka isticmaalka xayiraadaha oo haddii kale u baahan awood u lahaanshaha qoysaska dan yarta ah.
The Ogaysiiska Ilaalinta Kaydka ee 2020 ee Helitaanka Maalgelinta (NOFA) sharaxay macluumaad gaar ah oo ku saabsan xaq u yeelashada, shuruudaha maalgalinta iyo mudnaanta, nidaamka dalabka, iyo taariikhaha muhiimada.
Muddo caawimaad farsamo ayaa la bixiyay kahor taariikhda qabashada codsiyada. A Su'aasha Badiyaa La Weydiiyo (FAQ) dukumiinti ayaa loo diyaariyay codsadayaasha xiisaynaya.
2019-Ka-Codsi-bixinta Horudhac ah ee Qaab-dhismeedka XNUMX (Xidhan)
Ganacsigu wuxuu helay 11 codsi oo horey loogu sii diyaariyey Marxaladda 1 2019 Codsi Guryo La Qiimeyn Karo. Si aad u aragto liiska codsiyada ka hor la helay, booqo halkan.
Ganacsi ma sameyn doono go'aannada maalgelinta iyadoo lagu saleynayo heerarka hore ee codsiyada ay heshay. Marxaladaha 1-aad ee codsiyada horudhaca ah waxaa la lahaa Nofeembar 18, 2019.
Macluumaadka ku jira barnaamijyadan horudhaca ah waxay ka caawin doonaan Ganacsiga qorshaynta codsi Marxaladda 2 ee codsiyada ah iyo go'aaminta sida ugu wanaagsan ee loo abaalmariyo lacagaha loogu talagalay mashruucyada guryaha ee 'MODULAR' ee Miisaaniyadda 2019 - Bedelka Guriga Biil 1102, Qaybta 1029 (1) (b).
Ganacsigu wuxuu rajaynayaa inuu sii daayo Codsiga Marxaladda 2 horraantii 2020, iyadoo lagu dhawaaqayo abaalmarinno xagaaga horraantiisa 2020.
Si aad u aragto Marxaladda asalka ah ee 1 2019 Ogeysiiska Guryeynta La Heli Karo ee Helitaanka Maalgelinta (NOFA), booqo halkan.
Kooxda Sanduuqa Guryaha ee 'Trust Trust Fund' waxay qabteen websaydh markay ahayd Sebtember 5, 2019, si ay ugala hadlaan jadwalka maalgelinta ee la soo jeediyey isla markaana ay u soo ururiyaan jawaab celinta ku saabsan qabyo qoraalka NOFA ee kor ku xusan. Kaqeybgalayaasha webinar waxay fursad u heleen inay su'aalo weydiiyaan oo ay raadsadaan sharaxaad ku saabsan lacagaha loo heli karo NOFA. Si aad dib ugu eegto bogagga bandhigyada webinar iyo su'aalaha iyo jawaabaha la weyddiiyey intii lagu jiray webinar, fadlan booqo xiriirka hoose.
2019 MUUQAAL Guriyeynta Webinar & FAQ
Haddii aad su'aalo ka qabtid mid ka mid ah macluumaadka ku jira ogeysiiskan ama NOFA, la xiriir Ann Campbell, Hoos-qorista iyo Kormeeraha Mashruuca, ann.campbell@commerce.wa.gov, ama (360) 725-2983.
2019 HTF Maalgelinta Ilaalinta Guriyeynta (Xidhan)
Waaxda Ganacsiga ee Washington waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo abaalmarinta barnaamijka Maalgelinta Ilaalinta Guriyeynta ee 2019 (HPP) wareegga maalgelinta ee mashaariicda Sanduuqa Guryeynta ee hadda jira. HPP waxay awood u yeelatay inay maalgaliso 32 kamid ah 33 codsi wadar ahaan kudhowaad $ 15.1 M. Maalgashigan muhiimka ah wuxuu gacan ka geysan doonaa dhowrista iyo kordhinta mudada la awoodi karo ee 934 unug oo ah guryo la awoodi karo oo ku baahsan gobolkeena, 677 ka mid ah kuwa ka faa'iideysanaya qoysaska dakhligoodu aadka u hooseeyo iyo shaqsiyaadka (ka hooseeya 30% dakhliga dhexdhexaadka ah ee aagga). Guji halkan si aad u daawato liiska buuxa ee mashaariicda la siiyay.
Codsiyada iyo dukumiintiyada dheeraadka ah ee loo baahan yahay waxay ahaayeen Ganacsi bishii Diseembar 31, 2019. Si aad u aragto Codsiyada La Helay ama Ogeysiiska Helitaanka Maalgalinta (NOFA) iyo agabyada dalabka, booqo xiriirada hoose.
2019 Codsiyada HPP Liiska La Helay
Daryeelka Guryeynta NOFA iyo Qalabka Codsiga
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan HPP iyo wareegga maalgelinta 2019, fadlan booqo Bogga Barnaamijka Ilaalinta Guryaha.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir HTF Maamulaha Barnaamijka Kaydinta Xayeysiinta Guriyeynta, Angela Snow, lambarkan 360-725-2957 ama angela.snow@commerce.wa.gov.
2019 Maalgelinta Barakaca Guriga Guurguura ee Guryaha (Waa Xidhan yahay)
Kooxda Sanduuqa 'Trust Trust Fund' ayaa soo saaray a Ogeysiiska Helitaanka Maalgelinta ("NOFA") Caawinaada guri-guri ee qoysaska dan yarta ah ee ka barakacay guri guurguura ama guri lagu soo saaray koonfurta King County Agoosto 23, 2019.
Codsiyada waxaa laga tixgeliyey ururada awooda inay:
Caawinta qoysaska dakhligoodu hooseeyo si ay u helaan milkiile guri;
Bixiyaan gargaar shaqsiyeed koonfurta King County; IYO
Ku dadaal xoojinta caawimaadda qoysaska ka soo barakacay xiritaanka ama beddelaadda Firs Mobile Home Park oo ku yaal SeaTac.
Ganacsiga dib loo eegay codsiyada heerarka. Qeybta ugu dambeysa waxay ahayd Dec. 2, 2019.
Codsi ayaa laga helay Forterra NW iyadoo lala kaashanayo El Centro de la Raza. Codsigu wuxuu muujiyey sida loogu diyaar garoobay sii socoshada iyo awoodda si wax ku ool ah loogu caawiyo qoysaska barokacay si waafaqsan NOFA.
Ganacsigu wuxuu la shaqeynayaa Forterra NW si loo dejiyo tallaabooyin wax ku ool ah oo macquul ah oo loogu talagalay abuurista fursado guryo la awoodi karo oo loogu talagalay dadka deggan Firs.
Haddii aad su'aalo ka qabtid abaalmarintan, fadlan kala xiriir Kheyraadka iyo Qoondaynta iyo Maareeyaha amaahda Ann Campbell ann.campbell@commerce.wa.gov ama (360) 725-2983.
2019 Maalgalinta HTF Dhaqanka ah (Xiran)
Abaalmarinta Heerka 2019aad ee 2 ayaa lagu dhawaaqay
Wasaaradda Ganacsiga waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo 46 mashruuc oo ka heli doona maaliyad sannadka 2019 heerka 2. Wadar dhan $ 91.6 milyan oo deeqo iyo amaah ah ayaa gacan ka geysan doonta horumarinta qiyaastii 2,434 unug oo guryo la awoodi karo oo ku baahsan gobolka. Si aad u aragto liiska ugu dambeeya ee kuwa abaalmarinta la siiyay, guji halkan.
Codsiyada 2019 Heerka 2 ee La Helay
Ganacsiga wuxuu helay codsiyada 81 Marxaladda 2 ee barnaamijyada HTF, HOME, iyo National HTF ee loogu talagalay mashaariicda guryaha la awoodi karo ee gobolka oo dhan. Mashruucyada la soo jeediyay ayaa loogu talagalay inay u adeegaan dadyow fara badan oo dakhligoodu hooseeyo iyo baahiyo gaar ah, oo ay ku jiraan dadka qaba cudurrada maskaxda ee daba dheeraada, dadka naafada ah, halyeeyada, waayeelka, dadka ka shaqeeya beeraha, iyo dadka hoy la'aanta ah iyo qoysaska. Liiska codsiyada 2019 Heerka 2 ee la helay waa la daawan karaa halkan.
Kooxda HTF waxay dib u eegi doonaan oo ay qiimeyn doonaan codsiyada waxayna filayaan sameynta ogeysiisyo abaalmarin ah ama qiyaastii Diseembar 18, 2019.
Fadlan nala soo socodsii haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah. Haddii aad dareento in liiska Heerka 2 uu khaldan yahay (tusaale ahaan, in laga saarey arji ururkiina, tirada unugyada ayaa si khaldan u qoran, iwm.), Fadlan la xiriir Sean Harrington iimaylka sean.harrington@commerce.wa.gov, ama taleefanka (360) 725-2995.
2019 Gargaarka 2aad
Kooxda Sanduuqa 'Trust Trust Fund' ayaa soo saaray a Ogaysiiska Helitaanka Maalgalinta ("NOFA") mashaariic cusub oo guriyayn oo la awoodi karo. Araajida waxaa loo baahnaa duhurnimada Sebtember 18, 2019. Codsiyada waxaa loo tixgeliyey:
Mashaariic Kireysan Qoysas Badan iyo Mulkiileyaal Guri-guri oo ka raadsanaya maalgelin raasumaal Sanduuqa Guriyeynta Gobolka Washington.
Multifamily Kireynta iyo Milkiileyaasha guryaha mashaariicda raadinaya maalgelinta lagu hirgeliyo astaamaha Ultra High Energy Efficient (UHEE) oo loogu talagalay inay gaaraan heerarka net-zero ama Passive House.
Multifamily Kireynta iyo Milkiileyaasha guryaha mashaariicda raadinaya ciyaar gobal (es) ee tabarucaadka samafalka ee gaarka loo leeyahay.
Mashaariicda kirada badan ee qoysaska ee ka raadsanaya maalgelinta raasamaalka ee HOME-da federaalka iyo barnaamijyada Sanduuqa Amaanada Guriyeynta Qaranka.
Faahfaahin dheeraad ah, fadlan dib u eeg 2019 Marxaladda 2 NOFA. Dukumenti Su'aalo iyo Jawaabo ah ayaa sidoo kale la heli karaa.
Dhammaan codsadeyaasha xiiseynaya waxay awoodeen inay soo gudbiyaan codsiyada 2019 Heerka 2, iyadoon loo eegin inay soo gudbiyeen arjiga 2019 Marxaladda 1.
Codsadeyaasha qaarkood waxaa laga rabay inay sidoo kale codsadaan Barnaamijka Abaalmarinta Tayada Gobolka Washington (WSQA). Akhriso Jabtar 2, Qeybta 206.6, ee Buug-gacmeedka HTF si loo arko haddii tani adiga ku khuseyso. Ganacsi gaar ah su'aasha iyo jawaabta dukumintiga sidoo kale waa la heli karaa.
2019 iyo 2020 Marxaladda 1aad
Bishii Janaayo 16, 2019, Waaxda Ganacsiga waxay soo saartay a codsi codsiyada Heerka 1aad loogu talagalay wareegyada maalgelinta Sanduuqa Guriyeynta Sanduuqa 2019 iyo 2020. Codsiyada waxaa la rabay Febraayo 20, 2019. Barnaamijka Sanduuqa Maalgelinta Guryaha wuxuu helay 124 codsi oo wadarta codsi ah $ 244.4 milyan. Fadlan ka hel liiska codsiyada la helay Heerka 1 ee la heli karo si aad u soo dejiso hoos:
Codsiyada 2019 iyo 2020 Helay 1
Codsiyada Heerka 1 waxaa ku jira macluumaad xadidan waxaana kaliya loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo baahida gobolka oo dhan iyo baahida loo qabo Sanduuqa Amaanada Guriyeynta ee wareegyada maalgelinta ee 2019 iyo / ama 2020. Codsiyada Marxaladda 1 lama dhalinayo, sidoo kale go'aannada maalgelinta laguma sameyn doono iyadoo lagu saleynayo codsiyadaas. Abaalmarinta maalgelinta waxay ku xirnaan doontaa dib-u-eegis iyo oggolaansho codsi dhammaystiran Marxaladda 2 ee sannadka 2019 ama 2020.
Aqoon-isweydaarsiga Tababbarka HTF 2019
BARNAAMIJYADA SOO BANDHIGTA SHAQADA 2019 HTF
Ganacsigu wuxuu qabtay lix aqoon isweydaarsi bishii Maajo iyo Juun ee sanadka 2019 ee barnaamijka Sanduuqa Maalgelinta Guryaha.
Aqoon isweydaarsiga waxaa ka mid ahaa maalgelinta iyo mowduucyada u hoggaansamida ee daboolaya:
U hogaansanaanta - Sida loo joogteeyo u hoggaansanaanta ilaha maalgelinta
** CUSUB ** - Taageerada Bulshada Aasaasiga ah
Soo bandhigayaasha aqoon isweydaarsiga ayaa wadaagay macluumaad kusaabsan:
2019 Barnaamijka Sanduuqa Amaanada Guriyeynta helitaanka maalgelinta, tixgelinta arjiga, shuruudaha qiimeynta, iyo waqtiyada
Taageerada Bulshada Aasaasiga ah - Hindisaha 3 ee Isbadalka Caafimaadka Medicaid ee Caafimaadka Washington, oo ay ku jiraan adeegyada la heli karo, shuruudaha u-qalmitaanka, iyo macluumaadka ku saabsan sida loo codsado
La socodka u hogaansanaanta HTF, oo ay kujiraan faylalka iyo maaraynta hantida ee qoysaska badan iyo milkiilayaasha guryaha, oo lagu meeleeyo habraacyada adeegga, iyo macluumaadka ku saabsan jimicsiga u hoggaansamida: wareejinta, dib u habeynta, iyo dib-u-qaabeynta –Marka la gaarayo caawimaadda!
Shaqaalaha ka socda barnaamijka Sanduuqa Guryaha ee 'Trust Trust Fund' sidoo kale waxay bixiyeen saacad dhamaadka aqoon isweydaarsiga kasta si ay uga jawaabaan wixii su'aalo dheeri ah, oo ay si qoto dheer ugu dhaadhacaan doodaha ku saabsan bandhigyada
Waraaqaha aqoon isweydaarsiga ayaa laga heli karaa halkan.
Kaqeybgalka aqoon isweydaarsiga ayaa ahaa ma shardi ah in la dalbado maalgelin. Si kastaba ha noqotee, kaqeybgalka aqoon-isweydaarsiga ayaa laga yaabaa inay horumarisay fahamka codsadaha iyo awoodda uu ku soo gudbin karo dalab tartan ah.
2019/2020 Gargaar HTF-ga Dhaqanka ah (Wuu Xiran yahay)
2019/2020 Gargaarka HTF-ga ah ee caadiga ah (aka Marxaladda 1)
2018 Maalgalinta HTF Dhaqanka ah (Xiran)
Wasaaradda Ganacsiga (Ganacsiga) ayaa ku dhawaaqday in ka badan $ 22.8 milyan oo abaalmarin ah iyada oo ay ugu wacan tahay wareegga maalgelinta ee 2018, wadar ahaan ku dhowaad 66 boqolkiiba lacagaha la codsaday. Sagaal mashruuc ayaa ka dhisi doona 381 unug oo guryo la awoodi karo gobolka oo dhan. Guji halkan si aad u daawato liiska buuxa ee mashaariicda la siiyay.
Fadlan ogow: abaalmarinta mashaariicda qoysaska badan ee miisaaniyadooda ay ka mid yihiin Dhibcaha Canshuuraha Guriyeynta Dakhliga Hoose (LIHTCs) waxay ku xiran yihiin xaqiijinta 2019 LIHTCs.
Ganacsiga ayaa daabacay a Ogeysiiska Helitaanka Maalgalinta (NOFA) xagaaga 2018 si loogu abaalmariyo ugu yaraan $ 10 milyan oo ka hartay sanadihii 2017-19 Qoondaynta Hay'adaha Guryaha (HTF) ee qoondeynta qoysaska badan.
Intaa waxaa dheer, HTF waxay sidoo kale abaalmarin ku dhowaad $ 8 milyan ka heshay HOME-da federaalka iyo barnaamijyada Sanduuqa Maalgelinta Guryaha ee Qaranka intii lagu jiray wareegga maalgelinta ee 2018. Sharci dejinta ayaa sidoo kale u qoondeysay $ 5 milyan mashruucyada guryeynta oo ay ka faa'iideysan doonaan qoysaska ku barakacay masiibooyinka uu Guddoomiyaha ku dhawaaqay iyo lacagahaas oo ku saabsan abaalmarinta wareegga maalgelinta ee 2018 sidoo kale.
Codsadayaasha waxaa lagu dhiiri galiyay inay codsadaan wareega wareega 2aad, iyagoon loo eegin inay codsadeen inta lagu gudajiray wareega 1. Codsiyada Marxaladda 1 maahan shuruud lagu dalbado wareegga 2-aad.
Codsadeyaasha qaarkood ayaa sidoo kale looga baahnaa inay codsadaan Barnaamijka Abaalmarinta Tayada Gobolka Washington (WSQA). Akhriso Jabtar 2, Qeybta 206.6, ee Buug-gacmeedka HTF si loo arko haddii tani adiga ku khuseyso. A Dukumiinti u gaar ah ganacsiga iyo dukumiintiga jawaabta ayaa loo heli karaa tixraacaaga.
Codsadeyaasha raadsaday maalgelinta mashruucyada milkiileyaasha ama barnaamijyada waxaa looga baahnaa inay maraan Qiimaynta Awood Urur. Fadlan akhri Jabtarka 7, Qeybta 702.1.1 ee Buug-gacmeedka HTF wixii faahfaahin ah ee ku saabsan Qiimeynta.
Guryaha Caafimaadka ee Maalgelinta Deegaanka ee Pierce (Weli Socda)
Codsi ayaa si isdaba joog ah ugu furan mashruucyada guryeynta ee la awoodi karo ee raadinaya maalgelinta horumarinta mashruuca Guriga Caafimaadka ee Degmada Pierce. Codsadayaasha xiisaha lihi waa inay ogaadaan in dalabka aan dib loo eegi karin maalgalinta illaa inta Maamulka Degmada Pierce ay meel marinayaan iibinta iyo isticmaalka canshuurta, oo loo oggol yahay RCW 82.14.460, lacagaha ka soo baxa oo loogu talagalay in lagu taageero ku tiirsanaanta kiimikada ama adeegyada caafimaadka maskaxda. Aqoonta ganacsiga waqtiga la daabacayo NOFA, Degmada Pierce ma aysan qaadin canshuurta. Fadlan kala soo bax NOFA hoosta oo si taxaddar leh u akhri dhammaan shuruudaha intaadan dhammaystirin codsiga Guryaha Caafimaadka.
2017 Mashruuca Guriga Caafimaadka ee NOFA (furitaan joogto ah) (PDF)
Codsiga Guryaha Caafimaadka (Excel)
Guryaha Caafimaadka NOFA - Su'aalaha iyo Jawaabaha (PDF)
Deeqaha Xannibaadda Horumarinta Bulshada (CDBG) Kobcinta Guryeynta
Haddii mashruucaagu ku yaallo CDBG awood aan xuquuq u lahayn oo u baahan yahay maalgelin ka baxsan goobta * kaabayaasha shaqada ama tas-hiilaadka bulshada ee la xiriira, fadlan booqo CDBG Deeqaha Gaarka ah bogga wixii macluumaad ah ee ku saabsan barnaamijka CDBG, iskaashiga loo baahan yahay ee dowladda hoose, iyo shuruudo kale.
* Sanduuqa Amaanada Guryaha ma bixin karo kharashka kaabayaasha ka baxsan goobta.
Evergreen Horumar waara
Buug-gacmeedka Sanduuqa Amaanada Guriyeynta (PDF)
Barnaamijka Yaraynta Mulkiilaha
Hawlgallada iyo Sanduuqa Dayactirka
Sanduuqa Amaanada Guriyeynta Qaranka (NHTF)
TDC Tilmaamaha iyo Qalabka (shabakad)
Iskuduwaha Aqoon isweydaarsiga HTF 2019 (shabakad)
Qorshaha Maalgelinta Waxtarka Tamarta Sare (PDF)
Foomamka Cusboonaysiinta Miisaaniyadda (Excel)
2017 Slides Workshop - Codsiga Marxaladda 2 HTF (PDF)
Iskuduwaha Aqoon isweydaarsiga 2017 - Wax ka beddelka HTF iyo Ilaalinta (PDF)
Fursadaha Maalgelinta iyo Abaalmarinta
2020 Codsiyada HTF ee Dhaqanka ah ayaa La Helay
Codsiyada Beesha ee Guriyeynta & Cottage-ka ee 2020 la Helay
Codsiyada Guriyeynta Qaaska ah ee 2020 Lahelay
Abaalmarinta Ilaalinta Kharashka ee 2020
Codsiyada Ilaalinta Kordhinta 2020 Lahelay
2020 Dhaqanka HTF NOFA
2020 Guriyeynta Beesha / Guryaha Guriyeynta Beesha NOFA
2020 NOFA Guri Qaab-dhismeed ah
Ilaalinta qiimo jaban ee 2020 NOFA
Abaalmarinta Ilaalinta Guryaha ee 2019
2019 Codsiyada Ilaalinta Guryaha La Helay
2019 Ilaalinta Guryeynta NOFA
Abaalmarinta HTF ee 2019
2019 Codsiyada HTF ee Dhaqanka ah ayaa La Helay
2019 Dhaqanka HTF NOFA
2109/2020 Gargaar HTF-Caadiyan ah Codsiyada La Helay
2109/2020 Gargaar HTF-Caadiyan ah
2019-Guryeynta Kahor-Neefaynta Guryaha Codsiyada La Helay
2019-Guryeynta Kahor-Neefaynta Guryaha
Barakaca Guriga Guriga Guurguura ee 2019 NOFA
Abaalmarinta HTF ee 2018
2018 Codsiyada HTF ee Dhaqanka ah ayaa La Helay
2018 Dhaqanka HTF NOFA
Abaalmarinta Ilaalinta Guryaha ee 2018
2018 Gobolka King NOFA
Abaalmarinta HTF ee 2017
Abaalmarinta HOME & NHTF
2017 Codsiyada HTF ee Dhaqanka ah ayaa La Helay
2017 Dhaqanka HTF NOFA
2017-2018 Codsiyada Kahor-Gargaarka HTF-ga ee La Helay
Liiska Abaalmarinta 2016 (PDF)
Codsiyada 2016 Heerka 2 ee La Helay (PDF)
Codsiyada Tartanka ee Guryaha Caafimaadka 2016 (PDF)
Martiqaadka Heerka 2016aad ee 2 (PDF)
Codsiyada 2016 Heerka 1 ee La Helay (PDF)
Wareega Maalgalinta ee NOFA (PDF)
Liiska Abaalmarinta 2015 (PDF)
Codsiyada 2015 Heerka 2 ee La Helay (PDF)
Codsiyada 2015 Heerka 1 ee La Helay (PDF)
Abaalmarinta Wareegga 2014 ee LEAP (PDF)
Codsiyada 2014 Heerka 2 ee La Helay(PDF)
Abaalmarinta Wareegga 2013 ee LEAP (PDF)
Codsiyada 2013 Heerka 2 ee La Helay(PDF)
Codsiyada 2013 Heerka 1 ee La Helay(PDF)
Codsiyada Heerka 2013aad ee 2 Ayaa La Helay(PDF)
Codsiyada Codsiga Heerka Nolosha ee 2010 (PDF)
Codsiyadii Heerka 2010aad ee 1-kii ee La Helay (PDF)